Madaxweynaha Faransiiska oo booqanaya Magaalada qadiimiga Timbuktu ee Waqooyiga Mali – idalenews.com
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa booqasho kedis ku tagay dalka Mali oo ay ciidamadiisa si awood ah uga saareen waqooyiga dalkaas Xoogaga mintidiinta Islaamiyiinta ee sanadkii hore qabsaday kala bar dalka Mali.
Booqashada Francois Hollande oo aheyd mid la sugayay ayaa waxaa uu ugu horeyn ku tagay Caasimada Mali, halkaasoo uu kula kulmay madaxda dalka Mali ee Faransiiska ka caawiyay inay ka waabiyaan Islaamiyiintii qarka u saarna inay talada dalka la wareegaan.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa u gudbay magaalada qadiimiga ah ee Timbuktu, halkaasoo todobaadkii hore ay qabsadeen Ciidamada uu hogaaminayo Faransiiska, markii ay ka carareen Islaamiyiinta.
Madaxweynaha Faransiiska ayaa waxaa si diiran ugu soo dhoweeyay magaalada Timbuktu dadweyne aad u fara badan oo ku faraxsanaa howl galkii Faransiiska oo ku xoreeyay magaaladaas, kadib markii ay sheegeen in maleeshiyaadkii hore ay si naxariis daro ula dhaqmayeen.
Faransiiska ayaa qaadaya weji cusub oo dagaal, markii Islaamiyiinta inta badan ka carareen waqooyiga dalkaas, iyadoo ay muuqato marnaansho xaga ciidamada ah, magaalooyinka laga saaray Islaamiyiinta.
Wariyaha BBC-da Mark Doyle ayaa sheegaya in daraasiin ciidamo Faransiis ah oo ku hubeysan gawaarida gaashaaman ay safaf ugu jireen wadada ka timaada Koofurta ee aada Waqooyiga Mali sida magaalooyinka muhiimka ah ee Timbuktu iyo Gao.
Ciidamadan oo lulayay calamo ayaa dadka u gacan haatinayay, waxaana ciidamada geyntan la filayaa inay ka qeyb qaataan wajiga labaad ee dagaalka lagu jiro Mintidiinta Islaamiyiinta.
Dowladaha gobolka ee ku jira ururka ECOWAS ayaa Ciidamo ku taageeraya, si ay u xaqiijiyaan amaanka magaalooyinka lala wareegay.